ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တရုတ်ပြင်ပအလင်းရောင် fixtures ထုတ်လုပ်သူမှ ဦး ဆောင်ခဲ့သည် တင်ထားသော
Chz Lighting - 2011 ခုနှစ်မှစ. ပြင်ပအလင်းရောင်ပြုလုပ်ထားသောထုတ်လုပ်သူများကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။
AC LED LED လမ်း
RGB သည် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
အခမဲ့ ဦး ဆောင်လမ်းပြ followings နမူနာကိုအခမဲ့ရရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
CHZ Lighting ရည်မှန်းချက်တိုင်းဖောက်သည်ကျယ်ကျယ်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ properties ကိုမှစျေးကွက်မှမိမိတို့ applications များတွေ့ပါအဆင်ပြေနှင့်၎င်းတို့၏ applications.Our ထုတ်ကုန်၌အကြှနျုပျတို့၏ဦးဆောင်ပြင်ပအလင်းရောင်လ်တာနှင့်အတူယုံကြည်မှုခံစားရနိုင်သည်ကိုသေချာစေရန်မြင့်မားသောတိများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူဖောက်သည်ကျေနပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကရမ်းလူသိများလာပြီးလျှောက်လွှာများစွာ features တွေရှိသည်။
Chz Lighting Professional LEC LEACT LEAC LEACT ORV CB ROHS CBZ-st29
Chz Professional LEC street lead tuv cb rohs cb rohs cb rohs cb rohs cb rohs chz-st29 ရောင်းဝယ်ရေးသမားများ, Chz Laying သည် LED မီးခွက်များထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ISO9001, ISO14000 နှင့် ISO45001 လက်မှတ်များထုတ်ပေးသည်။ ကျနော်တို့အမြဲတမ်းတိမ်းညွတ်အဖြစ်ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားမှလိုက်နာခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အသစ်သောထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။CHZ အလင်းရောင်ပြင်ပတွင် LED ကိုလမ်း၏ယှဉ်ပြိုင်မှုအားသာချက်များ CHZ-ST29 ထွန်း:အများဆုံးစျေးကွက်၏လေလံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင် 1. အမြင့်အရည်အသွေး, ။ ဒီအဆုံးကျနော်တို့ဒီထုတ်ကုန်တစ်ခုပြည့်စုံစမ်းသပ်မှုများနှင့်လက်မှတ်ပွုမိပါပွီ: ENEC, အီး, EMC, LVD, TUV, ROHS, WEEE, IP66, IK10, 10KV / 20KV, IES, TM-21 + ISTMT, LM-82, Salt-Fog စမ်းသပ်ခြင်း, BOM, EN62471-R, LM79 နှင့်အသေးစိတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်လက်စွဲထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။2. အဆိုပါကိရိယာအစုံမောင်းသူနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးလူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်များမှာအရည်အသွေးကောင်းနှင့်အလင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပျသမားမြား၏ 60 ကျော်% 4-5 နှစ်ပေါင်းကျွမ်းကျင်လုပ်သားများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထုတ်ကုန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။3. ကောင်းတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်အပူလွန်ကျူးစွမ်းဆောင်ရည်, ရေစိုခံ, dustproof နှင့်လျှပ်စီးသက်သေ။ အဆိုပါအလုပ်လုပ်ကိုင်အပူချိန် -35 ကနေအပူချိန်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိဘဲထက်ပို 50000 နာရီဒီဂရီစင်တီဂရိတ် +50 မှဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအာမခံကာလ5နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ငွေပေးချေမှုပြီးနောက်အမြောက်အများအဘို့အ 4. မြန်ပေးပို့, နမူနာဘို့ 3-5 အလုပ်လုပ်ရက်, 15-20 အလုပ်လုပ်ရက်အမိန့်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပါသည်။5. အဆိုပါစီမံကိန်းကိုအတွေ့အကြုံရှိသည်။ ဒီထုတ်ကုန်ကိုအောင်မြင်စွာထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုကင်ညာလေဆိပ်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လမ်း, စပိနျလမ်းအလင်း, စပိန်ကားရပ်နားကွင်းအဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းများပြီးစီးခဲ့ပါသည်လျှောက်လွှာများ:ကျယ်ပြန့်စည်လမ်းများ, အဝေးပြေးလမ်းမကြီး, ခြီးမွှောကျလမ်းများ, လမ်းများ, တံတားများ, လမ်းဘေးစင်္ကြံနှင့်အခြားလမ်းအလင်းရောင်အဖြစ်ရင်ပြင်, ကျောင်းများ, ပန်းခြံများနှင့်အခြားပြင်ပအလင်းရောင်လိုအပ်ချက်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Chz Lighting Sports Lighting Chaz-Fl32 အားကစားကွင်းအတွက်ရေလွှမ်းမိုးသောအလင်း
CHZ Professional ကကတရုတ်ထံမှ CHZ-FL32 ထုတ်လုပ်သူမီးကွင်းများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဦးဆောင်သောရေလွှမ်းမိုးအလင်းစျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အသုံးအနှုန်းများတှငျကြှနျုပျတို့အမြဲတမ်းတိမ်းညွတ်အဖြစ်ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားမှလိုက်နာနှင့်အဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်အသစ်တွေတီထွင်ခဲ့ကြသည်။CUSHTATEARTS:အေအလွန်ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းစတိုင်, 1 မှ5module တွေ, အသင်းတော်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အသင်းတော်ကိုရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်နားလည်သဘောပေါက်။ခွေပါသိနီးချာိတင်းအကျအရင်းအပင်ပြကာအကြောင် Band Weenty Baby Bantentiousifulate 6063 လေးဖန်လ်နွမ်းဗီစ် - ဖန်ဆန်သည်ဖန်ဆန်သည်C. ရေ module နှစ်ခုတစ်စုသဈခြံ (ဆန်းစစ်ခြင်း) မှ00 င်0င်0င်0င်0င်0င်,ဃအထူးကြမ်းတမ်းပတ်ဝန်းကျင်မှာများအတွက်သင့်လျော်သောဆီမီးရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကုသမှု, ဆားမှုန်ရေမွှားချေးဖို့ခိုင်မာတဲ့ခုခံ, ကိုလေပေါ်မှာပ။အီးအရည်အသွေးမြင့် SMD3737 သို့မဟုတ် SMD3030 ဆီမီးခွက်ပုတီးမှနှင့်အရည်အသွေးမြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ drive ကို Adapt ကို, တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ရှည်သောအသက်; ခြံကာကာကလောင်ပုန်စွန့်ပစ်ချက်မှာအငှားမှု။အက်ဖ်မြင့်မားထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းကို PC ကိုမှန်ဘီလူး်ပေးရန် 10 ° / 25 ° / 40 ° / 60 ° / 90 °နှင့်အခြားအလင်းဖြန့်ဖြူးထောင့်ကွဲပြားခြားနားလျှောက်လွှာကးများအတွက်သင့်လျော်သော optional ကိုကိုဖြစ်ကြသည်။
Chz အလင်းရောင်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး LED Garden Light Chz-GD29
2020 စတိုင်အသစ် LED ဥယျာဉ်အလင်း Chz-GD29 LED LED ၎င်း၏မတူနိုင်သည့်အားသာချက်များကြောင့်ဤထုတ်ကုန်ကိုဖြန့်ချိကတည်းကဖောက်သည်များကချစ်ကြပြီ။ထုတ်ကုန် features များ:1) မီးခွက်တစ်ခုလုံး၏ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းသည်လှပပြီးရက်ရောသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းကိုဖြုတ်နိုင်သည်, အထုပ်သည်အရွယ်အစားသေးငယ်သောကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အဆင်ပြေသည်။2) မီးခွက်အလောင်းကိုလူမီနီယံသေဆုံးသောပစ္စည်း, သမားရိုးကျအရောင်များသည်မီးခိုးရောင်နှင့်အနက်ရောင် (အရောင်ရည်ညွှန်းချက်, Ral 9005/7015 Ral), မျက်နှာပြင်သည်ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်ချေးသည်3. dual diles diftuser illuminan illuminan illuminan သည်အလင်းကိုပိုမိုယူနီဖောင်း, တောက်ပမှုမရှိဘဲအလင်းသည် ပို. အဆင်ပြေသည်။4. မီးခွက်တစ်ခုလုံးတွင်ကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှုစွမ်းရည်ရှိပြီး IP66 နှင့် IK09 သို့ရောက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးပျက်စီးရန်မလွယ်ကူပါ။5. 3030E အလင်းအရင်းအမြစ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောမောင်းနှင်ခြင်း, တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု,လျှောက်လွှာများ:ကျယ်ပြန့်သောမြို့ပြလမ်းများ, ကားရပ်နားရန်နေရာများ, စက်ဘီးလမ်းများ, စက်ဘီးလမ်းများ, ဥယျာဉ်များ, ပလာဇဂရမ်, လူနေအိမ်များနှင့်အခြားပြင်ပနေရာများတွင်အလင်းရောင်။Chz အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး LED Garden Garden Light Chz-GD29 ကုမ္ပဏီ - CHZ သည် ISO9001: 2015 အရည်အသွေးအရည်အသွေးအရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်, ISO14001: 2015 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် ISO45001 လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုမှု။
Chz Lead Hight Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead HB15
LED High Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead UFO CHZ-HB15 သည် BAY BAY အလင်းအိမ်အလင်းအိမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤမီးခွက်တွင်ဂန္ထဝင်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောလုံခြုံစိတ်ချမှုနှင့်အပူဖြိုခွဲထားသည်။ ၎င်းသည် Philips 3030 အလင်းအရင်းအမြစ် 3030 ကိုချမှတ်သည်။ အလင်းထိရောက်မှုသည် 140lm / W, CRI 80 နှင့်အာမခံကာလသည်5နှစ်ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာ, ကျယ်ပြန့်လျှောက်လွှာအကွာအဝေး။ CHZ ကုမ္ပဏီသည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရ configuration ကိုညှိနိုင်သည်။ LED High Lead Light Lead Lead Light Light, Chz Lighting သည်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ထုတ်ကုန် features များ:A. ထူးခြားသောပုံသဏ္ design ာန်ဒီဇိုင်း, UFO ၏ပုံသဏ္။ ာန်သန့်ရှင်း။ခ။ SOCESS စီးရီးကားမောင်းသူ, မြင့်မားသောထိရောက်မှု, ကောင်းသောတည်ငြိမ်မှုကိုသုံးပါ။C. Philips3030 မြင့်မားသောတောက်ပသောထိရောက်မှုရှိသော LED ချစ်ပ်များသည်အပူဖြိုခွဲမှုကောင်းသည်။D. Flat Light ကို 60 ° / 90 °ပါသောအမျိုးမျိုးသောထောင့်မှန်ဘီလူးဖြင့် configure လုပ်နိုင်သည်။E. ကောင်းမွန်သောအပူအရှိန်အဟုန်, မြန်သောအပူဖြိုဖျက်ခြင်း, အလင်းရောင်သည်အသက်ရှည်သောအလင်းအရင်းအမြစ်ကိုသေချာစေရန်အလင်းရောင်သည် 30 ℃ထက်မကျော်လွန်ပါ။လျှောက်လွှာများ:စက်ရုံများတွင်စက်ရုံများတွင်အသုံးပြုသောစက်ရုံများတွင်အသုံးပြုသောလက်လီအရောင်းဆိုင်များ, ရုပ်ရှင်ရုံများ, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်မိုးကောင်းကင်ဆက်များနှင့်အခြားနေရာများနှင့်အခြားနေရာများမှာအပြေးအလွှားသို့ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အစားထိုးစိုက်ပျိုးသည်။
ပူးတွဲမီးရှန်ဟိုင်း CHZ ။ , Ltd ။
CHZ အလင်းရောင်၏တစ်ခုလုံးကိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိကျခိုင်မာစွာနှင့်စံကား, အရောင်းအဖွဲ့သည်အတွေ့အကြုံနှင့်တက်ကြွအပြည့်အဝသည်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးအချိန်မီစိတ်ရှည်, စိတ်အားထက်သန်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်နိုင်ပါတယ်။
☀1. စုံစမ်းရေးကော်မရှင်: အဆိုပါဖောက်သည် Information စီမံကိန်းအသုံးပြုမှု, မီးသက်ရောက်မှု, စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်များ, အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လိုအပ်ချက်များကို, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အခြားလိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များကိုလိုအပ်သည်။
☀2. ဒီဇိုင်း: နည်းပညာနှင့်ဒီဇိုင်းအသင်းများကိုအကောင်းဆုံးထုံးစံ-ဒီဇိုင်းထုတ်ကုန်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မသေချာစေရန်စီမံကိန်းများ၏ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
☀3. အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု: တစ်က high-quality ဖွဲ့စည်းပုံမှာပေးနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့အနေနဲ့ထိရောက်သောအရည်အသွေးမြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အထိန်းသိမ်းရန်။
☀4. မစ္ဆားထုတ်လုပ်မှု: functions များ, parameters တွေကိုနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုအသုံးအနှုန်းများအတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုပြီးနောက်နောက်တစ်ဆင့်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
☀5. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် intermodal ဝန်ဆောင်မှုအခြားပေးသွင်း, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်မှတဆင့်ကျနော်တို့အမိန့်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီစဉ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
☀6. ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှု: တပ်ဆင်ခြင်း, လမ်းညွှန်မှုဝ; တက်ကြွစွာအသေးစိတ်အတွက်ပျက်ကွက်ဖြေရှင်းညှိနှိုင်းရန်။
☀7. လက်ဆောင်ပေးမယ်ဝန်ဆောင်မှု: သင်အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်ဆုကြေးဇူးကိုဝန်ဆောင်မှုကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏ဦးဆောင်ပြင်ပအလင်းရောင်လ်တာထုတ်ကုန်ကမ်ဘာပျေါတှငျဗတ္တိဇံနေကြသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုယ့်ကဏ္ဍ၏တိကျသော features တွေအတွက်စိမ်မထင်သော်လည်း, ငါတို့သည်လည်းကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုသို့နက်ရှိုင်းစွာ delve: "အဘယျနညျးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' ဖောက်သည်စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်" "ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအဆုံးစားသုံးသူရဲ့ဝယ်ယူလိုသောဆန္ဒဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်?" ဒါကငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပြုပါမည်ဟုအရာဖြစ်တယ်။ ဤသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းကိုသို့သင်၏စီမံကိန်းဖွင့်ပုံဖြစ်သည်။
လမ်း / စတုရန်း / ဥယျာဉ်အတွက်တရုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းမီးသတ်စီမံကိန်း (အာဂျင်တီးနား) ထုတ်လုပ်သူများ
လမ်း / စတုရန်း / ဥယျာဉ်အတွက်တရုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းမီးသတ်စီမံကိန်း (အာဂျင်တီးနား) ထုတ်လုပ်သူများ --.Chz Lighting၎င်းကိုတစ်နိုင်ငံလုံးရောင်းပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်မျက်နှာသာပေးခဲ့သည်။
အကောင်းဆုံးလမ်းပြမြေပုံစီမံကိန်းများ (PONEVEDRA) ပေးသွင်းသူအတွက် LED LED
Best Road Lighting Project Street (Pontevedra) ပေးသွင်းသူအတွက် LED မီးများ။Chz Lighting - တရုတ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံး Lead Light Light Mover
Palenciana ရှိဘတ်စကက်ဘောလယ်ကွင်းအတွက်မိုးလုံလေလုံအားကစားကွင်းအလင်းစီမံကိန်းအတွက် (Cordoba)
Palenciana ရှိဘတ်စကက်ဘောလယ်ကွင်းအတွက်မိုးလုံလေလုံအားကစားကွင်းအလင်းစီမံကိန်းအတွက် (Cordoba)အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး LED LED LED LED High Light Light မှထုတ်လုပ်သူ - Chz Lighting
Palenciana ရှိပြင်ပအားကစားကွင်းအတွက်ပြည်သူ့အလင်းတန်းစီမံကိန်း (COLENBA)
Palenciana ရှိပြင်ပအားကစားကွင်းအတွက် Public Lighting Project Palenciana (Cordoba) ။ထိပ်တန်း LED Lights ထုတ်လုပ်သူတရုတ် - chz အလင်းရောင်
Ltd. , ရှန်ဟိုင်း CHZ Lighting ကုမ္ပဏီ
☀ရှန်ဟိုင်း Chz Lighting ကို 2010 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအလင်းရောင်ထုတ်ကုန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ကုမ္ပဏီသည် ISO9001: 2015 အရည်အသွေးအရည်အသွေးဆိုင်ရာစနစ်အသိအမှတ်ပြုမှု, ISOO14001: 2015 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် ISO45001 လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုမှု။
☀ထုတ်ကုန်များအရ Chz Lighting သည် ဦး ဆောင်သည့်ပြင်ပအလင်းရောင်နှင့်စွမ်းအားမြင့်သောမိုးလုံလေလုံအလင်းရောင်ကိုအာရုံစိုက်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် "ဦး ဆောင်နည်းပညာနှင့် ဦး ဆောင်အရည်အသွေး" ၏မြင့်မားသောစံနှုန်းများကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာပြီးထုတ်ကုန်အသစ်များကိုအမြဲတမ်းပိုမိုခိုင်မာလာစေပြီးအရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းများနှင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်မှုကိုအာရုံစိုက်ရန်, တစ်ခုချင်းစီကိုမီးခွက်။ အဓိကထုတ်ကုန်များသည် Tuv, CB, Rohs, Rohs, UL, DLC, DLC, SAA နှင့်အခြားနိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ချက်များကိုအတည်ပြုသည်။
0 န်ဆောင်မှုအရ chz အလင်းရောင်၏0န်ဆောင်မှုတစ်ခုလုံးသည်တိကျခိုင်မာစွာနှင့်စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ အရောင်းအဖွဲ့သည်စုံစမ်းရေး, ဒီဇိုင်း, အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု, ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး,
လူမှုရေးတာ0န်0တ္တရားအရ Chz သည် Shanghai Jiaing Nanxiang လူမှုဖူလုံရေးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်တိဘက်ကလေးများ၏လူမှုဖူလုံရေးဖောင်ဒေးရှင်းကဲ့သို့သောကုသိုလ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများသို့0င်ရောက်စွက်ဖက်ခဲ့ပြီး "Shanghai ခရိုင်, 2020 ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကုမ္ပဏီမှသူဌေးသည် Hubei သို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမျက်နှာဖုံးများ, ပိုးသတ်ဆေးများ, အကာအကွယ်ပေးသည့်အဝတ်အစားများနှင့်အခြားပစ္စည်းများအားလှောင်ပြောင်ရန် Hubei သို့ကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်ခဲ့ပြီး "Covid-19 တိုက်ပွဲဝင်သည့်အနေဖြင့် Advided Man" ၏ဂုဏ်ယူမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ Chz သည်ထုတ်ကုန်များအတွက်တာ0န်ရှိရုံသာမကလူ့အဖွဲ့အစည်း, နိုင်ငံနှင့်အနာဂတ်အတွက်တာဝန်ရှိသည့်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ဒီဇိုင်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်များအတွက်အခမဲ့ website ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဒါရုံအဆက်အသွယ် form မှာသင့်အီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ထားခဲ့ပါ!
Tel: +86 216989816169
E-MAIL: SALLORY@Chz -CHELLING.com
Address: No.581, Xiangjiang လမ်း, တရုတ်ရှန်ဟိုင်း
မူပိုင်ခွင့်© 2021 ရှန်ဟိုင်း Chz Lighting Co. , Ltd.